आज जेठ ४ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
May 17, 2020 1647
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) स्वा’स्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छि गर्ने बानिले काम’हरु बिग्रन सक्छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमि’कमा दिनभर समय ब्या’तित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिनेछैन । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । काम वा अध्ययनको शिलशिला’मा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) दाजुभाइ वा अग्रजह’रुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाइ लेखाइमा मन जानेछ । बौद्धिकता प्रयोग गरि समा’जमा राम्रा काम गरेर देखाउँन सकि’नेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । तरपनि तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बा’हेक यात्रा नगर्नुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) समाजसेवा तथा राजनीतिमा समय दिनेहरुले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको सहयोग पाउनेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धा’नको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ भने तपाईको बौद्धिकताको सबैले सम्मान गर्नेछन् । प्रेम’को डोरो कसिलो भएर जानेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरस’फाइमा ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अलि बढी सम’य खर्चिए सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ भने अध्यानमा प्रगति भएर जानेछ । धर्म तथा धार्मिक प्रविति मनमा जागृत हुनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेह’रुका लागि समय उत्त’म रहेकोछ । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरस’फाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) आफन्त तथा दिदीबहिनीसँग साना कुरामा राय बाजिनेछ भने घमण्ड गर्ने बानिले आफैलाई समस्या पार्नेछ । आर्थिक मुद्दाहरु हल हुनुको सट्टा थप जटिल ब’न्नेछ । बोलिमा रुखोपना बढी आ’उने हुँदा आफन्त तथा सा’थीभाइहरु टाढिनेछन् । भौतिक सम्पति प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा ‘घट्नाहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) विगतका कमजोरिहरुलाई सुधार गर्दै स्वअध्ययन गरि वौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बनाउन सकिनेछ । प्रेम प्रसंगमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले’ साथ दिनेछ । औषधीजन्य तथा खा’द्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घा’टा लाग्नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारह’रु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) इष्टमित्र तथा आफन्त’का साथ मिठा मिठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धिको मनोबल गिरा’उँदै सकारात्मक उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हल भएर जाने तथा पुराना लेनदेनका मुद्दाहरु किनारा लाग्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनु’को साथै पुरस्कार जित्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) आफ्नो ज्ञानलाइ सहि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा चुनौति पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । बौद्धिक’ताको प्रतिस्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ । सन्ता’न तथा छोराछोरीको सहयोगले राम्रा ‘काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइईमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) भौतिक सम्पति तथा विलाशि बस्तुको व्यापारमा मन्दि आउनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । आमा तथा आफन्तसँग सा’नो सानो कुरामा मनमुटाब बढ्नेछ । प’ढाइ लेखाइमा मन नजाने तथा खोजमुलक क्षेत्रको कामहरु थाति रहनेछन् । राजनीति तथा समाजसेवि’हरुले समाजमा काम देखाउन नसक्दा विश्वास जित्न अलि बढी नै समय खर्चनु पर्नेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गरि गन्तब्य भेटाउन सकिनेछ । दाजु’भाइ तथा छिमेकिहरुसँगको’ सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम ग’र्ने जाँगर आउनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापा’रमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) तपाईको कामको’ धेरैले प्रशंसा गर्नेछन् । स्वअध्ययनले तार्किक क्षमतामा बृद्धि भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिठो म’सिनो खाने अवसर जुर्नेछ । प्रेमले सकारात्मक मोठ लिनेछ भने कुटुम्बसँगको सम्ब’न्ध सुदृढ भएर जानेछ । तरपनि तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सबैको’ सहयोग पाइने हुनाले काम गर्न जोस जाँगर आउनेछ । सामाजिक काममा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । विद्यार्थीहरुले मेहनेत गरि राम्रो नतिजा हात ‘पार्न सक्नेछन् । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढेर जानेछ भने परिवार तथा आत्मिय मित्रमा साथ रमाइलो यात्रा हुनेछ । तरपनि वाहिरी वातावर’ण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । – ज्यो. गणेश प्रसाद काफ्ले
Prevविदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले अब धमाधम नेपाल फर्काउने
Nextआजको विदेशी मुद्राको भाउ यस्तो छ : हेर्नुहोस्
चर्चित गायिका रचना रिमाल आफ्नै फ्यानबाटै लखे`टिइन्….
कोरोनाले नेपालमा आज ४ जनाको मृ’त्यु , यी जिल्लाका हुन् मृ’तक
एकै जना मानिसको १३ जना श्रीमती, ती १३ श्रीमतीनै एकैचोटी गर्भवती भएपछि
तिमीले भन्दा बढी दु’ख र सं’घर्ष मैले गरेकी छु तर पनि जीवनबाट हारिन, तिमीले किन हार्‍यौं”
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136459)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (111402)